Halkee ayuu marayaa wada xaajoodka heshiis kordhinta ee Barcelona iyo Marc-Andre Ter Stegen? – Gool FM
(Barcelona) 16 Juun 2020. Wararkii ugu dambeeyay ee ka imaanaya dalka Spain ayaa warinaya in wada hadalladii u dhexeeyay Barcelona iyo Goolhayaheeda Marc-Andre Ter Stegen ee heshiis kordhinta ay marayaan meel gabo-gabo ah.
Barca ayaa ugu dambeyn ku kalsoon inay dhammeystiri doonto qorshaha heshiiska loogu kordhinayo shabaq-ilaaliyaha Jarmalka ah.
Labada dhinac ayaa la rumeysan yahay inay isla meel dhigi doonaan heshiiska cusub, waxaana lagu soo warramayaa inta uusan dhammaan xilli ciyaareedkan si rasmi ah loogu dhawaaqo qandaraaska cusub.
Ter Stegen ayaa hadda Barcelona kula jiro qandaraas dhacay xagaaga 2022, waxaana wada hadallada heshiiskiisa lagu kordhinayo ay billawdeen bishii Febraayo inkastoo ay hakad galeen intii ay kubadda cagta maqneyd.
Goolahayahan ayaa doonayay mushaharaad fara badan oo uu qalma ka qayb qaadashada guulaha kooxda maadaama uu ka mid yahay xiddigaha ugu muhiimsan safkooda, balse markii uu arkay xaaladda dhaqaale ee Blaugrana, wuxuu aqbalay dalabka heshiiska cusub ee ay usoo bandhigtay kooxdiisa.
Barcelona ayaa ka fikireysa inay isku beekhaamiso miisaaniyaddeeda mushahar bixinta xilli ay heshiisyo hor dhac ah la gaareen Lautaro Martinez oo ka tirsan Inter Milan iyo Miralem Pjanic oo u ciyaara Juventus.
"Jurgen Klopp wuxuu mudan yahay in bannaanka Anfield loogaga dhiso taallo" - Steven Gerrad
"Wax badan ayaan ku bartay Barcelona" - Jose Mourinho